Dowlada oo maanta shaaca ka qaadday tallaabooyin lagula tacaalayo shilalka – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada oo maanta shaaca ka qaadday tallaabooyin lagula tacaalayo shilalka
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Matiangi iyo dhiggiisa wasaaradda gaadiidka James Macharia ayaa maanta xariga ka jaray tallaabooyin dhowr ah oo ay dowladu qorsheynayso in lagu xaqiijiyo badqabka rakaabka.
Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo maalinka isniinta ah 12-ka bishan la billaabayo howlgalo ka dhan ah shirkadaha baabuurta ee aanan dhameystirin shuruucda laga doonayo.
Shuruucdan mar kale dhaqangelinteeda dib loo soo celiyay ayaa loogu magacdaray wasiirkii hore ee gaadiidka James Michuki.
Waxaa ka mid ah in rakaabka ay xirtaan suumanka ka raaraca kuraasta ay ku fadhiyaan , in gawaarigu uu lahaado qalabka lagu xakameeyo xawaarihiisa , darawalka iyo gacan yarihiisa inay xirtaan labis lagu aqoonsan karaan sido kalena soo bandhigaan sawiradooda.
Dr. Matiangi , Mr. Macharia iyo agaasimaha maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka wadooyinka ee NTSA Mr. Francis Meja ayaa sheegay inay khasab tahay in shuruucdan ay si buuxda u dhaqangasho si loo yareeyo shilalka wadooyinka ee laga soo tabiya qeybaha kala duwan ee dalka.
Wasiirka oo ka hadlayo baahida loo qabo in la xalliyo caqabadaha dhanka gaadiidka dadweyanha.
Agaasimaha waaxda dacwad soo oogidda dalka Nuurdiin Xaaji ayaa mar kale amray in baaritaano dheeraad ah lagu sameeyo shilkii bishii hore ka dhacay ismaamulka Kericho ee galaaftay noolosha 58 qof.
Waxaa uu abaanduulaha booliska Mr. Joseph Boinnet amar ku siiyay inuu dabagal ku sameeyo shirkadii caymiska iyo midii sameysay baskaasi.
Dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha Dr. Matiangi ayaa maanta si rasmi ah xaafadda Upper Hill ee magaaladatani Nairobi uga furay xafiisyada qeybta arrimaha gudaha ee waaxda qaran ee adeegga booliska ee (IAU).
Qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee twitarka ayuu ku sheegay in tallaabadan ay sara u qaadi doono islaxisaabtanka iyo horumarinta waxqabadka waaxda qaran ee adeega booliska.
Qeybtan ayaa arrimaha loo xilsaaray waxaa ka mid ah ilaalinta xuquuqda aas-aasiga ah ee shacabka, inay qaabisho sido kalena baaritaano ku sameyso cabashooyinka ka dhanka ah booliska, ka hortagga musuqmaasuqa , xoojinta daahfurnaanta iyo habdhaqanka wanaagsan ee ciidamada.
← 200 oo xabaal-wadareed ah oo laga helay Itoobiya
Waxaa isa soo taraya baaqya nabadeed →